Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta kulan ku yeelanaya Muqdisho – Kalfadhi
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay maanta kulankooda 13aad ee Kalfadhiga 5aad ku yeeshaan magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Ajendaha kulanka maanta ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ah laba qodob oo kala ah.
1. Akhrinta koowaad ee Hindise Sharciyeedka Dakhliga.
2. Akhrinta saddexaad ee Hindise Sharciyeedka Shirkadaha, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Ibraahim Muudeey ayaa lagu wadaa inuu shir Guddoomiyo kulanka maanta ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Inkastoo ay hore u baaqday Kulamo badan oo katirsan Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka ayaa hadane waxaa jirta digniino ay Guddoonka Golaha Shacabka u jeediyeen Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya, taas oo ah in ay ilaaliyaan waqtiga kulamada Baarlamaanka Soomaaliya.